Maxaa ka khaldan tayada ciidammada Soomaaliya? - BBC News Somali
Maqaal dheer oo uu soo qoray wargeys lagu magacaabo 'War On Rocks' ayaa looga hadlay waxyaabaha ka khaldan ciidammada Soomaaliya, waxaana warbixinta qoray Paul D. Williams oo bare ka ah jaamacadda George Washington ee dalka Mareykanka.
Waxaa uu sheegay, in ka badan 10 sanno ciidammada dowladda Federaalka ee Soomaaliya waxaa wakhti, dadaal iyo qalab ku bixinayay dowladaha caalamka, waxaana ku baxday dib u dhiskaas malaayiin dollar.
Qiimeyn ay dowladda Soomaaliya, Midowga Afrika, Qaramada Midoobey iyo Mareykanka ay sannadkii 2017-kii sameeyeen ayaa lagu xaqiijiyay in ciidammada ay heysato daryeel la'aan, waxaana la sheegay in ciidammada aysan heysan adeegyada aasaasiga ah oo ay ka mid yihiin hubka, qalabka isgaarsiinta iyo gawaarida dagaalka.
Waxaa maqaalka sidoo kale uu ku xusay in ciidammada Soomaaliya ay sameeyaan howlgallo aanan ballaarneyn, isla markaana ay ku tiirsan yihiin ciidammada AMISOM iyo Qaramada Midoobey, si looga caawiyo tageero dhanka agabka iyo daadgureynta dhaawaca ah.
Waxaa uu sheegay in dalalka shisheeye ee ku lugta leh dhisidda ciidanka Soomaaliya aysan wax qorshe ah u heyn arrintaas, waxaana ka mid ah barnaamijyada lagu tageerayo qalabeynta iyo hubeynta ciidanka Soomaaliya oo si xun loo maareeyo.
Soomaliya ; Saameynta bixitaanka ciidamada shisheeye
Maqaalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in dalalka caalamiga ah ay ku guuldareysteen inay ka dhaadhiciyaan hoggaamiyeyaasha Soomaaliya inay la yimaadeen nidaam siyaasadeed oo dib loogu dhisayo ciidamo qaranka.
Balse waxaa jiro dadaal wanaagsan oo ku aadan in la helo ciidan awood leh, waxaana ka mid ah diiwaangelin casri ah oo ciidanka lagu tirakoobayay taas oo la filayo in lasoo afjaro bisha June iyo howlgalkii ciidamada ay dib ugu qabsadeen deegaanno ku teedsan wobiga Shabeelle.
Balse tallaabooyiinka horseedi kara in lagu guuleysta dhisidda ciidammo awood leh, ayaa waxaa kamid ah in shuruudo adag lagu soo roggo barnaamijyada taakuleynta caalamiga ah ee loogu talagalay ciidanka dowladda Federaalka iyo sidii loo hagaajin lahaa xiriir qoto dheer oo u dhexeeyo mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya iyo mid ka mid ah dalalka shisheeye ee dowladda ka taageero qalabeynta ciidanka.
Dalalka taageerada siiyo dowladda Soomaaliya waxay doonayaan in la helo ciidan dhameystiran balse waxaa looga baahan yahay dowladda Federaalka iyo Dowlad-Goboleedyada in ay si wadajir ah uga shaqeeyaan ciribtirka musuqmaasuqa, iskaashiga dhanka amniga iyo in ay taageeraan ciidammada AMISOM.
Beesha caalamka waa in ay shuruudo hor leh kusoo roggaan ka hor inta dowladda Soomaaliya aanan la siin dhaqaalaha ama tageerada loogu talagalay amniga iyo ciidamada.
Waa in masuq masuuqa laga hortaggaa gaar ahaan miisaaniyadda loogu talagalay wasaaradda amniga, Haddii la dhameystiro diiwangelinta casriga ah ee lagu tirakoobayo ciidamada, waxay dowladda ka caawin kartaa in aanan la lunsanin dhaqaalihii wasaaradda amniga.
Maxay ka dhigantahay ciidamada Mareykanka ee la geeyay Soomaaliya?
Howlgalka AMISOM iyo dowladda Federaalka ee Soomaaliya waa inay ku heshiiyaan sidii ay ula shaqeyn lahaayeen kumanaan ciidamo oo ka mid ah kuwa maamul goboleedyada oo ay kamid yihiin ciidamada booliska.